0.1 “Hej Jerry, ahoana ne ahafahako manao bolongana igračka ny anao?”
1 Ahoana no ahazoan’ny mpamaham-bolongana vola?
2.1 Ahoana no ahafahanao manao bilaogy vola, ho an’ny tena?
2.2 Tandindomin-doza + fandrindrana taranja = vola
3 Tombanana tsara
4 Ahoana no ahitanao milina mahasoa?
4.1 Fomba # 1: Manaraha ny vola
4.4 Povezno povjerenstvo
4.5 Fomba # 2: Facebook
4.5.1 Ampiasao ny pejin’ny Facebook sy ny vondrona Facebook hahatakatra ny fananananao fananananao
4.5.2 Ampiasao ny soso-kevitra Facebook mba hitadiavana mpifaninana
4.6 Fomba # 3: Fikarohana fikarohana teny amin’ny sekoly fanabeazana taloha
4.7 Inona nema pogrešnih podataka Kokoa amin’ny podataka?
4.8 Ampiasao ny fikarohana teny fototra mba handinihina ny laharana iray: Fihetsehana fohy
4.9 Fanapahan-kevitra: Vitsy kely na lehibe?
5 Ciljani promet
5.1 Ny fomba mahomby indrindra hampiroboroboana ny blôginao
5.2 1. Objavljivanje gostiju
5.3 3. Adiresy Facebook
5.4 Fanomezana br. 2: Mampirisika ny vokatra avy amin’ny orinasa amin’ny sehatra samihafa
5.5 Ideja br. 3: Manomàna birao iray
6 TL; DR / Mandrosoa
6.1 Akcija Makà!
“Hej Jerry, ahoana ne ahafahako manao bolongana igračka ny anao?”
Amin’izao fotoana izaho aho dia mahazo ny fanontaniana “mametraka vola an-tserasera” amin’ny namana sy ny fianakaviana.
Raha mikaroka ‘manao fitoraham-bola amin’ny banky’ ao amin’ny Google ianao, iray amin’ireo valim-pikarohana soso-kevitra atolotr’i Google dia “azonao atao tsara ny mitoraka blaogy”.
Hiandry aho! 🙂
“Manaova ny votoatiny tsara; ny vola sy ny Fiveamoivoizana dia hanaraka, “hoy ilay manam-pahaizana.
Tamin’ny fotoana voalohany nanombohako, maro ireo webmasteri (mariho – dia mbola niankina tamin’ny fitaovana iray antsoina moe “Uvertira”) – izay ahafahanao mametraka fomba fikarohana tsotra fotsiny ny ‘mpitoraka blaogy’ ary ny rafitra dia hanome endrika sarotra anao indraindray io teny io dia mikaroka, maimaim-poana. Aminay dia ampitahao ireo isa ireo miaraka amin’ny habetsaky ny valim-pifidianana ary hitsara ny fiveaninanana (ary ny profitabilnost) amin’ny niche.
Mba hahatakarako tsara kokoa ny tabilao, matematika aho dia mampitaha ny fironana tsy fantatra amin’ny zavatra fantatro. Amin’ity ohatra ity dia nampidiriko ny teny motika “fanamarinana hosting”. Hitanao fa misy olona maro kokoa mitady “afisy sarimihetsika”.
Tsindrio ao amin’ny “sarimihetsika” amin’ny sarimihetsika ary tsindrio “Dobiti ideju”.
Fehezanteny manan-danja ahitana ny “Napravite filmski poster” – ireo mpikaroka ireo no tena mitady ny lesona sy fitaovana fanontam-pirinty.
“Manana trondro lehibe ao anaty dobo kely”, hoy izy ireo.
Alefaso aloha ireo lahatsoratra efa navoakany sy tadiavo ireo vokatra na serivisy voalazanao. Raha vao hitanao izy ireo, mandehana fotsiny bilo koji amin’ny tranokala tsirairay ary mitadiava pejy “Partneri”.